Guul weyn oo gujis ah oo garaacis Mareykan ah oo gudaha ah
Qaybta weyn ee xirxiran ee tuubbooyinka Mareykanka ee leh giraan gudaha waxay ka kooban yihiin labo qeybood oo waaweyn, kuwaas oo ah qaabka weyn ee dharka hoseelka Mareykanka iyo giraan gudaha ah. Giraanta gudaha waxaa si gaar ah looga sameeyay cabbir qafiif ah oo tayo sare leh oo tayo sare leh si loo hubiyo xiridda iyo adkeynta.
Isku-dabool joogto ah
Xirmooyinka xarig-jarka joogtada ahi waxay leeyihiin laba nooc oo faashado xirmooyin ah, kuwaas oo ah 14.2mm iyo 15.8mm, bandwidth 14.2mm wuxuu leeyahay 4-labo oo guntin guga ah, iyo 15.8mm bandwidth wuxuu leeyahay 5 lammaane oo guntinnada guga ah.
Gawaarida degdegga ah ee Maraykanka ee sii daaya
Bandhiga xawaaraha degdega ah ee Mareykanka ee soosaara tuubada waa 12mm iyo 18.5mm, Si fiican ayaa loogu dabaqi karaa nidaamyada xiran ee ay tahay in loo furo rakibaadda.
14.2mm nooca hose Mareykan ah
Xaraashkani waa nooc kor loo qaaday oo ah nooca caadiga ah ee Maraykanka, oo leh xarig ballaadhan oo 14.2mm ah, xooggiisuna uu ka sarreeyo kan caadiga ah ee Maraykanka caadiga ah.
12.7mm nooca hoseeska Mareykanka ah oo isku xirta
12.7mm Nooca Mareykan ah ee hose ku haya gacanta ayaa la mid ah midka 12.7mm oo ah nooca hose Mareykan ah. Waxay ka samaysan tahay qalab adag, laakiin waxaa ku yaal gacanta dheeri ah oo ku jirta moolka. Xaraashku wuxuu leeyahay laba nooc: bir iyo caag.Handle midab ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
12.7mm nooc Mareykan ah tuubbo hose
Qalabka isku-dhejiska ah wuxuu ka kooban yahay walxo adag, sidoo kale waa loo sameyn karaa si gaar ah iyadoo loo eegayo baaxadda uu u baahan yahay macmiilku.
8mm Mareykan ah hose cuf
Qalabka ugu yar ee Mareykanku leeyahay wuxuu leeyahay kaliya hal xajmig 8mm.It waxay iska leedahay cufan fudfudud, kaliya waxay u baahan tahay 2.5NM oo ah fuulitaanka dabka. Qalabka isku-xidhka ahi wuxuu bixin karaa adeeg la isku halleyn karo oo waara, wuxuu bixin karaa cadaadis sarreeya. Boolalku waxay leeyihiin 6 iyo 6.3 geesaha iska soo horjeeda.
Nooca culus ee culus ee Mareykan loo yaqaan
Nooca Mareykan ah ee alaabooyinka culus culus ee culus wuxuu leeyahay xayiraad xajmiisu yahay 15.8mm waana qaab afar gees leh oo culus oo ku wareejin kara awood adag adkeynta suunka birta leh godad. Marka lagu daro cabirrada shaxda, waxaa sidoo kale lagu beddeli karaa iyadoo la eegayo cabirka uu u baahan yahay macmiilku.